I-EMUI 10 isemthethweni: Thola zonke izindaba zayo | Izindaba zamagajethi
I-EMUI 10 yethulwe ngokusemthethweni: Zonke izindaba
U-Eder Esteban | | Android, AmaSelula
I-EMUI 10 manje isemthethweni, ngemuva kwezinyanga amahemuhemu. Yinguqulo entsha yesendlalelo esenziwe ngokwezifiso sikaHuawei, esuselwe ku-Android Q. Njengenjwayelo kulolu hlobo lwamacala, umkhiqizo waseChina usishiya nochungechunge lwezici ezintsha kule nguqulo entsha yesendlalelo sokwenza kube ngokwakho, ukuvumela ukusetshenziswa okungcono kakhulu amafoni ngabasebenzisi.
Kwakusenkomfa yabathuthukisi bayo eChina lapho iHuawei wethule izinto ezintsha ze-EMUI 10. Abanye babo bebevuza kulezi zinyanga, ngakho-ke singathola umbono wokuthi yini esingayilindela ngalesi sikhathi. Lezi yizinguquko eziza kuleli cala.
1 Isibonisi esisha ku-EMUI 10
2 Imodi emnyama
3 Imodi yemoto
4 Ukuxhumana namanye amadivayisi
5 Khiya isikrini
6 Njalo ku-Display
7 EMUI 10 Izingcingo ezihambisanayo
Isibonisi esisha ku-EMUI 10
I-EMUI 10 izosishiya nesixhumi esibonakalayo esisha. Inkampani uqobo ikuqinisekisile, yize kuze kube manje asikaze sikwazi ukubona lutho ngakho. Kukhulunyiwe ukuthi kuleli cala kuzothunyelwa nge-interface ene-navigation ezansi kwewindi. Ngaphezu kwalokho, nabo basilindele ngamafonti amakhulu, imigqa elula kanye nemifanekiso emisha. Ngokusobala, lokhu kugqwayiza okusha kuzoba namandla futhi kube bushelelezi.
Enye yezinto ezintsha esezizofika isingeniso imodi emnyama ku-EMUI 10. Umkhiqizo waseChina umemezela ukuthi lesi sici sethulwa ngokwendabuko, ukuze uhlelo kanye nezinhlelo zokusebenza zizothola le thoni emnyama. Ngaphandle kwalokho, nezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle zithola le modi emnyama uma isetshenziswa ocingweni. Kuzokwenzeka ngoba bazofiphaza ngokukhalipha.
Lowo wonke umbhalo okhonjiswe kufayela le- isikrini siyafundeka kungenye yezinkinga ezinkulu zikaHuawei kuleli cala. Ngakho-ke, inkampani iqinisekisa ukuthi ukunakwa okukhethekile kukhokhelwe kule ngxenye. Konke ukufeza imodi emnyama lapho i-interface ihlala ifundeka futhi kulula ukuyisebenzisa ngaso sonke isikhathi.
I-Android Auto manje ithola inguqulo yayo nge-EMUI 10. Kulokhu, IHuawei yethula iHiCar, okuzokuvumela ukuthi uxhume ifoni nemoto ngaso sonke isikhathi. Lapho senza lokhu, abasebenzisi bazonikezwa ukufinyelela emisebenzini eminingi. Phakathi kwabo sithola ukulungisa umculo olalelwayo, ukuhamba kwemoto ngesikhathi sangempela noma ukwazi ukuvula i-air conditioning ngaphambi kokungena, phakathi kweminye imisebenzi. Ngakho-ke kungaba inketho ethokozisayo.
Ukuxhumana namanye amadivayisi
Esinye isici esibalulekile kuleli cala yi- ukuxhumana noma ukuxhumana namanye amadivayisi. I-EMUI 10 yethulwe ngale ndlela njengendlela yokwenza lula ukwenziwa kwemvelo yeHuawei. Le nkampani izokwenza kube lula ukuxhuma ifoni namadivayisi anjenge-drones noma isipikha esihlakaniphile somkhiqizo (namanje ngaphandle kosuku lokuqalisa eSpain). Futhi esimweni sokuxhuma nekhompyutha kukhona ukuthuthuka.
Empeleni kuyinsimu lapho besishiya khona nezinguquko eziningi. Kusukela ngokwesibonelo lokho okubizwa ngokuthi yi-wireless projection sethulwe kwikhompyutha. Kungumsebenzi ongadonsela ngawo amafayela kusikrini sefoni esibonakalayo. Lokhu kuyinto esizosivumela ukuthi sikopishe amafayela phakathi kwalawa madivayisi womabili, kuzo zombili izinkomba, ngaso sonke isikhathi.
Ubuhlakani bokufakelwa buyaqhubeka nokutholakala ku-EMUI 10. Iphinde ishaye ukukhiya isikrini ngalesi sikhathi, ngoshintsho oluzwakala luthakazelisa impela. Okuqukethwe kwezithombe kusikrini sokukhiya sefoni kuzohlaziywa. Ngokwenza lokhu, umbhalo uzobekwa endaweni lapho okuqukethwe kungeke kumbozwe kanjalo. Isikrini sizosetshenziswa kangcono ngale ndlela. Ngakho-ke, ngokuya ngesithombe esikhona, indawo yalowo mbhalo izoshintshwa.
I-Huawei ivuselela Njalo kwimodi yokubonisa nge-EMUI 10. Amafoni ohlobo lwaseChina manje asethola izithombe ezintsha, ezinemibala egqamile, zokuhlobisa ngazo ifoni uma ingasetshenziswa. Kwethulwe nemiklamo emisha yokubuka amawashi, kanye nemihlobiso emisha kulokhu. Ungakhetha nganoma yisiphi isikhathi lezo ofuna ukuzisebenzisa kudivayisi.
EMUI 10 Izingcingo ezihambisanayo
Ngaphezu kokumemezela izindaba zayo, iHuawei iphinde yakuqinisekisa ukuthi Ngizokhipha ku-EMUI 10 beta ngoSepthemba 8. Izingcingo zokuqala ezizohambisana nayo seziveziwe. Okwamanje luluhlu olwehlisiwe, yize kulindeleke ukuthi lukhule emasontweni. Kepha okwamanje sinohlu lwamafoni azokwazi ukuwathola ngoSepthemba walo nyaka.
Amafoni azokwazi ukufinyelela ku-beta ye-EMUI 10 Yilezi: I-Huawei Mate 20, i-Huawei Mate 20 Pro, i-Huawei Mate 20 Porsche Design, i-Huawei Mate 20 X, i-Huawei P30, i-Huawei P30 Pro, i-Huawei P30 Lite, i-Honor V20 ne-Honor Magic 2. Okwamanje yibo kuphela umkhiqizi waseChina uqinisekisile, impela sizoba namagama amasha kungekudala, ngakho-ke silinde izindaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-EMUI 10 yethulwe ngokusemthethweni: Zonke izindaba
I-Wiko Y80, ukuhlaziywa ngenani nezici
Isibani seSYMFONISK nesipika esivela ku-IKEA naseSonos, kuncane okungaphezulu [ukubuyekeza]